Somaliland: “wixii ka dhaca Tukaraq, C/Wali Gaas ayaa mas’uul ka ah”. – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTASomaliland: “wixii ka dhaca Tukaraq, C/Wali Gaas ayaa mas’uul ka ah”.
Somaliland: “wixii ka dhaca Tukaraq, C/Wali Gaas ayaa mas’uul ka ah”.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Maamulka Somaliland Baashe Maxamed Faarax ayaa ka jawaabay eedeyn uga timid dhinaca Puntland oo ahayd in Maamulka Somaliland ay taageerayaan Al-shabaabka dagaalka kula jira Puntland.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Somaliland ayaa sheegay in Tukaraq ay ka mid tahay degaannada Somaliland islamarkaana Ciidamada ay ka fushadeen dan ay halkaas u tageen.
Wxaaa uu xusay in xudduuda Somaliland iyo Puntland ay 7km u jirto Garowe islamarkaana aysan Somaliland ilaa hadda xadgudub geysan.
Baashe ayaa ka digay in haddii colaadda Tukaraq sii korodho in wax laga weydiinayo Madaxweynaha Puntland C/Wali Maxamed Cali Gaas.
Waxaa uu xusay in Somaliland ku mashquulsantahay dhimaha iyo horumarinta degaannadeeda islamarkaana aysan diyaar u ahayn dagaal ay la gasho Puntland.
Madaxweynaha Puntland ayaa xalay Somaliland ku eedeeyay in dagaalka Tukaraq ay ku garabsiinayaan Al-shabaab,taas ooo uu ku sheegay in ay dhibaato ku keeni doonto amniga labada dhinac.
43,604 total views, 554 views today
43,604 total views, 554 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
43,676 total views, 554 views today
43,676 total views, 554 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
43,690 total views, 554 views today
43,690 total views, 554 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
43,712 total views, 554 views today
43,712 total views, 554 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
43,747 total views, 556 views today
43,747 total views, 556 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]